ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၂ (Saying Thank You - 2) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 5, 2012 at 10:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်း - ၂
မနေ့ကသင်ခန်းစာက ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကို ရင်းရင်းနှီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ပိုပြီးအလုပ်သဘောဆန်တဲ့ စာဟန်ပေဟန်ပုံစံရေးနည်း ကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။
I am writing to thank you for your active participation in our conference. You really helped to make the eventagreat success.
I would like to apologise for the poor attendance at the Saturday afternoon session. When we planned the conference, we did not realize that it clashed with the World Cup finals!
Once again, many thanks and I look forward to seeing you in Yokohama next year.
Lucy Lo Kit
ကျွန်မတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြား လို၍ စာရေးလိုက်ရပါတယ်။ ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ဖြစ်မြောက်အောင် တကယ့်ကို ကူညီခဲ့တာပဲ။ စနေနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာ တက်ရောက်သူ နည်းတဲ့အတွက် ကျွန်မ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို စီစဉ်တုန်းက ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ-ဗိုလ်လုပွဲတွေနဲ့ တိုက်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ မသိလိုက်ဘူး။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နှစ် ယိုကိုဟာမားမှာ တွေ့ရန် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပြောသော အတော်အသင့်စာဟန်ပေဟန်ပုံစံရှိသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါကျေးဇူးတင်စကားများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- We really appreciate all your help. (ခင်ဗျားရဲ့အကူအညီ အားလုံးအတွက် တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
- We’re very grateful for your help. (ခင်များရဲ့အကူအညီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောရန် ပို၍ ရင်းနှီးသော အသုံးအနှုန်းမှာ -
- I’m very / really sorry about it. (ဒီ့အတွက် ကျွန်တော် အရမ်း/တကယ် ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။)
အစီအစဉ်နှစ်ခု “clash” (တိုက်နေသည်) ဖြစ်တယ်ဆိုသည်မှာ ၄င်းတို့သည် တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖြစ်ပျက်သည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
Permalink Reply by Ma zin lay nwe on October 5, 2012 at 12:04
Permalink Reply by aung aung on October 5, 2012 at 14:40
should be "thanks" or "thank you"
there is no usage as "thank"
Permalink Reply by wainwenwetun on October 5, 2012 at 17:09
Permalink Reply by minkhanttun on October 5, 2012 at 18:46
Permalink Reply by maswezinaung on October 5, 2012 at 19:35
I amanew member. I am really greatful to beamember of myanmar network. When I read posts and browse through, I found that it isagood site for learners. I will always keep in touch . Many thanks for Saying Thank you (1,2) too.
Permalink Reply by Tun Lin Aung on October 6, 2012 at 11:32
Permalink Reply by War Lay on October 6, 2012 at 13:37
Permalink Reply by Su Le Thwe on October 6, 2012 at 18:15
Permalink Reply by oneonekaw on October 7, 2012 at 18:31
Permalink Reply by drsaithuhan on October 8, 2012 at 13:30
i feel very gladful for that,thanks.
Permalink Reply by Moe Moe on October 9, 2012 at 20:50
Permalink Reply by za byu soe on October 10, 2012 at 8:13